(1)G talk Hack ချင်သူတွေအတွက် software လေးပါ။|(2)G-TALK ချက်ဘောက် နောက်ခံမှာ မိမိပုံလေးတွေ ထည့်ချင်ရင် ~ ITmanHOME
16:08 Gmail No comments
(1)G talk Hack ချင်သူတွေအတွက် software လေးပါ။|(2)G-TALK ချက်ဘောက် နောက်ခံမှာ မိမိပုံလေးတွေ ထည့်ချင်ရင်
G talk Hack ချင်သူတွေအတွက် software လေးပါ။
ဒီ software လေးက G talk လိုပဲတစ်ပုံစံထဲပေါ်ပါတယ်။
username နဲ. password ရိုက်ထည်.ရင် username and password do not match ပဲပြမှာပါ။
တကယ်တော. username နဲ. password က ကိုယ်. notepad ထဲမှာ လာပေါ်မှာပါ။
G-TALK ချက်ဘောက် နောက်ခံမှာ မိမိပုံလေးတွေ ထည့်ချင်ရင်
မိမိ ထည့် ထားသော အပုံလေး ကို ချက်ဘောက် မှာ မြင်တွေ့ ရမှာဖြစ်ပါသည်..
အဆင်ပြေကြပါစေ .. ဆန္ဒများစွာဖြင့်ဘလော့ဂါ ညီ